MAGACA MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA DHAQANKA & AKHRISKA | Alice
Ka go'an naqshadeynta iyo soo saarista magacyada birta illaa 1998
Calaamadaha birta - alaabooyinkaaga ayaa ah safiirka
Soosaarka ugu weyn ee Alice wuxuu leeyahay nooc kasta oo calaamad oo laga sameeyay bir bir ah, itanium, naxaas ah aluminium iyo wixii la mid ah. Daboolida korantada, cadaadiska, digida, nadiifinta, caag ka baaraandegida iwm.
Diiradda saar alaabta guryaha iyo aaladda qalabka elektiroonigga ah.
Warshad Calaamadda Aluminium ee Aluminium Tayada ugu Fiican
Laydh xirfadeed Aluminium Aluminium, faahfaahinta ku saabsan sumadda aluminium rindium.21 sano oo ah khibradaha soosaarka ee birta, oo laga soo qaaday naqshadeynta ganacsiga ee loo yaqaan 'Expremar' ee loo yaqaan 'Produch', isku xirka ayaa ah mid sifiican u ah, ku soo bandhig qalabka maaraynta sare, oo la xakameeyo nidaamka maaraynta soosaarka oo dhan, oo ku dadaal inaad abuurto tayada ugu fiican.
Khadadka ugu wanaagsan ee CD-ga ee ugu fiican
Miyaad raadineysaa aluminium badge badge? Faahfaahinta ku saabsan calaamadda aluminium wareegsan.Annaga (Alice) waa 21-sano oo bir ah oo birta ah oo 21 sano ah calaamadaha habeynta ganacsiga. Waxaan haynaa in kabadan 100 shaqaale ah, oo ah 1500 oo mitir oo laba jibbaaran, oo aan sii wado soo bandhiga qalabka wax soo saarka casriga ah. Si loo haqabtiro baahiyaha tartanka suuqa oo ay raacaan isbeddelka dhaqaalaha, sannadihii ugu dambeeyay, si isdaba joog ah ayaan u horumarinay ganacsiga ganacsiga gudaha iyo shisheeye, si joogto ah u sameynta horumar iyo hal abuur.
Ugu fiican Shiinaha ee ugu fiican ee Aluminium Badge ee Soosaarayaasha Alice-Alice - Alice
Xirfadlaha aluminium aluminium, faahfaahinta ku saabsan aluminium aluminium ugu fiican.Alice ugu fiican Shiinaha ee Qiimaha Aluminium Aluminium Aluminium ProceS-a Alaince-Alice - Alice, warshad u gaar ah iyo in kabadan 100 shaqaale ah, kharashyada ayaa ka yar isla warshadaha 2% oo leh isla tayo isku mid ah.Annaga (Alice) waa wax soo saar xirfadle ah oo ku saabsan magaca kharashka guriga, waxaan soo saari karnaa zinc aloy, aluminium, naxaas, iwm.
Calaamadaha aluminium altoy astels waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa nolol maalmeedka-Shiinaha-aluminium badge-alice
Raadinta aluminium alume? Faahfaahinta ku saabsan calaamadda casaanka casaankaBadge waa qayb muhiim ah oo ka mid ah badeecad kasta si loogu aqoonsado aqoonsi guud iyo xoogga soo saaraha.Alloy oo ku saleysan aluminium oo leh xaddi cayiman oo kale oo ka mid ah waxyaabaha kale ee qaybaha kale waa mid ka mid ah agabyada birta fudud.
Maxaa loo yaqaan 'Chosse Alice'?
Alice waxay dabooshaa 2000 mitir oo laba jibaaran waxaana ka shaqeeya in kabadan 50 shey oo ka shaqeeya halkaan halkaas oo ay ku jiraan waaxda oo dhan: Qc, naqshad, dallacsiin, kooxdeena, kooxdeena xirfadeed ayaa abuuri doona tayo sareTusaalooyinka birta adiga.
Illaa iyo hadda, Alice ayaa durba haysata 5 rukhsad oo iskaa ah, oo waxay u leedahay adeeg loogu talagalay baahiyaha shaqsiyeed. Waxay sidoo kale dhistay iskaashi muddada fog ah oo shirkado badan oo caan ah oo ay la leedahay shirkado badan oo caan ah, Fox Tusaale: Huawei, casaanka casaanka iwm iwm.
Kooxda hagidda xirfadda leh ee ganacsiga, oo si caqli gal ah u caqli badan + horumarinta silsiladda warshadaha
Waxay muhiim u tahay qandaraasle kasta oo aan ka badneyn miisaaniyadda waana sababtaas sababta aan u bixinno feejignaan ugu badan.
Mashruuc kasta oo aan ka shaqeynaa waxaa laga hubinayaa hubinta tayada si loo qanciyo baahiyaha bulshada casriga ah.
Kooxdayada xirfadda leh waxay ku rakibi karaan dhammaan noocyada qalabka dhismaha ee dhammeystiran qayb ka mid ah adeegyada dhismaha ka dib.
Ku saabsan Alice
Alice waxay u heellan tahay badeecad sax ah maadaama la aasaasay 1998, iyaga gaar ahaan diiradda saara qalabka guryaha iyo qalabka elektiroonigga ah sida u janjeera.
Soosaarka ugu weyn ee Alice wuxuu leeyahay nooc kasta ooTusaalooyinka birta laga sameeyay bir bir ah, itanium, naxaas ah aluminium iyo wixii la mid ah. Daboolida korantada, ka-saaridda, nadiifinta, burooyinka, alice ayaa sameyn kara dhammaan kaararka iwm, sida calaamadaha qaboojinta, lambarka guriga, nambarka xalka, xaashiyaha koodhka.
"Tayada ugu sarreysa, hufnaanta ugu fiican" waxaa loo qaataa sidii aragtideena horumaray.
Raadinta halka ay magacyada birta ku yaal alice-ka
Soosaarka ugu weyn ee Alice wuxuu leeyahay nooc kasta oo calaamad oo laga sameeyay bir bir ah, itanium, naxaas ah aluminium iyo wixii la mid ah. Daboolida korantada, ka-saaridda, digirta, nadiifinta, sida Alice-ka ayaa sameyn kara dhammaan kaararka iwm, sida calaamadaha qaboojinta, lambarka guriga, nambarka xaashida,Calaamadaha birta ee alaabta guriga Iyo wixii la mid ah.
Ka baaraandegida calaamadaha birta, geedi socodka wax soo saarka ee warshadaha calaamadaha calaamadaha
Mabda'a ah mashiinka loo soo jediyay waa in la wado flywheel ku dhex dhaqdhaqaaqa, iyo iyada oo loo marayo qalabka xajin iyo gudbinta inuu kaxeeyo kumbyuutarradeedu iyo xira farsamo ushii inuu u dhaqaaqo slider ah kor iyo hoos, iyo in la wado dhinta sawirka si ay u sameeyaan saxan bir ah. The wax-u hab tallaabo double in saxaafadda waxay leedahay laba sliders, kuwaas oo loo kala qaybiyey slider hoose iyo slider dibaddeeda. The drives gudaha slider feer ama dhinta of caaryada, iyo drives slider dibadda giraanta haysta maran on caaryada. Isla mar ahaantaana, haystaha maran guuro first to riix cidhifka saxan bir ah, ka dibna ay u dhaqaaqdo slide hoose in stretch. Dhab ahaantii, waxa aan wici mashiinka feedh ah waa magac caam ah, taas oo ah waxa inta badan aynu u qayshanno mashiinka feedh ah. Magaca cilmiga ah waa in loogu yeeraa jaraa'id.
Si adag u xakamee tayada birta saxeex habsami u socodka howlaha dhaqaalaha iyo alitaanka alice-alice
Saxaafadda hydralic (nooc ka mid ah hydralic saxaafadda) waxay u isticmaashaa saliida khaaska ah ee ganaax ahaan sidii dhexdhexaad oo shaqeynaya iyo bam-biyoodka sifeysan oo ah ilo koronto. Saliida hydraulic-ka ayaa soo gala dhululubada / baisbada iyada oo loo marayo dhuumaha hydralic ee xoogga bamka, ka dibna intee in le'eg oo dhululubo ah / baismad ah oo ku saabsan shaabadaha isbarbardhiga ah, shaabadaha ka dhacaya xilal kaladuwan ayaa ka duwan, laakiin dhammaantood waxay ciyaarayaan doorka shaabadaysan, si saliida hydralic uusan soo daadin karin. Ugu dambeyntiina, iyada oo loo marayo wan-geedka hal-geedka ah, saliida hydralic waxaa lagu wareejiyaa haanta saliida si ay u sameyso dhululubo / bastoolad si ay u qabtaan shaqada si loo dhammaystiro ficil farsamo oo ah nooc mashiin ah.
Weyne oo ah mid u yaqaan 'xirfad-yaqaan' alice-ka alice-alice sicir wanaagsan - Alice
Qalabka qalabka guryaha ee xirfadlaha ah ee alice-kaAnnaga (Alice) waa wax soo saar xirfadle ah oo ku saabsan magaceedka alaabta guryaha, waxaan soo saari karnaa zinc aloy, aluminium, naxaas, iwm. Calaamadaha la soo saaray waa iftiin iyo wax ku ool, qurux badan oo deeqsinimo leh, oo leh faahfaahin heer sare ah, shaqooyin jilicsan, iyo aragti saddex-geesood ah oo adag. Waa dawada dusha sare ee caadiga ahAlice waxay u egtahay alice aliji alice-alice oo leh qiime wanaagsan - alice, warshad iyo in kabadan 100 shaqaale ah, kharashyadu waxay ka yar yihiin wax la mid ah warshadaha 2% leh tayo isku mid ah.
Haddii aad su'aalo dheeraad ah qabtid, warqad noo soo qor!